၄။ Centerset ၂ လက်ကိုင်ရေချိုးခန်း Faucet
ပင်မစာမျက်နှာ / ရေချိုးခန်း Faucets / ရေချိုးခန်း Faucets နှစ်ဆကိုင်တွယ်ပါ ယိုစီးမှုနှင့်အတူ / WOWOW Chrome ကိုရေချိုးခန်း Faucet
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 4.745ထဲကအပေါ်အခြေခံပြီး 23 ဖောက်သည် ratings
Wowowfaucet စုဆောင်းမှုသည်စတိုင်၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တတ်နိုင်မှုတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့်မည်သည့်ရေချိုးခန်းကိုမဆိုအကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်သည်။ တစ်စက္ကန့်လျှင် ၁.၂ ဂရမ်လျှင်အများဆုံးစီးဆင်းမှုနှုန်းသည်ရေကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ကြွေပြား disk အဆို့ရှင်ကျည်သည်အစက်အပြောက်ကင်းသည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်၊ သတ္တုမှုနှုန်းချိတ်ဆက်မှုယိုစီးမှုနှင့်အတူတည်ဆောက်မှုကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုနေ့စဉ်အိမ်သာများအတွက်စိတ်ကူးယဉ်ရွေးချယ်မှု
2321400C installation ကိုညွှန်ကြားချက်
၄ လက်မစင်တာတွင်ဗန်းတိုင် ၂၂၂၁၄၀၀ စင်တီမီတာအမြင့်: ၇.၅″; Spout အမြင့်: 4″; အပေါက်အရွယ်အစား: 2321400 - 7.5 mm4.4 - 25 ''
Chrome Vanity ရေချိုးခန်း Faucet - ဇိမ်ခံ Chrome အဆုံး၊ မှန်ကဲ့သို့ထင်ဟပ်သည့်အပြင်ခေတ်ပြိုင်ရေချိုးခန်းအလှဆင်မှုများအတွက်အသင့်တော်ဆုံး၊ ကိုက်ညီသောအိမ်၊ ကွန်ဒို၊ တိုက်ခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊
Double Handle Basin Faucet - အပူချိန်နှင့်အသံပမာဏကိုညှိရန်လွယ်ကူသောလက်ကိုင် ၂ ခုအပြင်အဆင်၊ မြင့်မားသော arc spout သည်သင့်အား spout အောက်တွင်ရှင်းလင်းသောရှင်းလင်းမှုကိုပေးသည်။
မြင့်မားသောအရည်အသွေး - NSF ကြွေထည် disk သည်ယိုစိမ့်မှုမရှိခြင်း၊ တာရှည်ခံသောပစ္စည်း (SS201 နှင့် zinc metal)၊ ABS aerator သည်ချောမွေ့ချောမွေ့စွာရေစီးဆင်းစေသည်။
SKU: 2321400C Categories: ရေချိုးခန်း Faucets, ရေချိုးခန်း Faucets နှစ်ဆကိုင်တွယ်ပါ Tags: ပရိသတျယိုစီး, ပွတ်မှာ chrome, အစက်အပြောက်ခုခံတွန်းလှန်
တစ်ဦးက *** င2020-03-28
အလွန်ကောင်းမွန်သည့်ဒီဇိုင်း၊ faucet မြင့်တက်လာမှုသည်သင်၏လက်နှင့် ဦး ခေါင်းကိုဆေးကြောရန်အခန်းနှင့်အတူစွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီးဆင်းမှုကိုဗဟိုပြုသည်။
သူတို့အတူတူဒီဇိုင်းအတွက်မီးဖိုချောင်စုပ် faucet လုပ်လိုပါတယ်။
တစ်ဦးက *** င2020-03-29
ဂရိတ် faucet နှင့်စျေးနှုန်း။ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။
L ကို *** ဃ2020-04-02
ငါသည်ဤ faucet ၏အသွင်အပြင်ကိုချစ်။ ရေချိုးခန်းပုံသဏ္inာန်အတွက်ကြီးမားသောခြားနားချက်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်း။
L ကို *** ဌ2020-04-05
ငါ့ရေချိုးခန်းအတွက်အကောင်းဆုံး leakLooks ကဂန္ထဝင်မဟုတ်တော့ဘူး။ ကြီးစွာအလုပ်လုပ်သည်နှင့်ရေကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေပါ။
တစ်ဦးက *** w2020-04-05
စျေးနှုန်း၊ အရည်အသွေးနှင့်စတိုင်နှင့်အလွန်ကျေနပ်ရောင့်ရဲသောကြောင့်၎င်းသည်ပိုက်အမျိုးအစားနှင့်လက်အိတ်ဖြင့်လာသည်။ အကယ်၍ သူသေလျှင်ကျွန်ုပ်၏အခြားရေချိုးခန်းစုပ်ယူရန်အခြားတစ်လုံးရလိမ့်မည်။
M က *** ဎ2020-04-05
တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်၊ အရည်အသွေးကောင်းပြီးအလွန်လှသည်။ အလွန်ကြွယ်ဝသောနှင့်လိုက်ဖက်ကြည့်ရှုသည်။
: D *** ဃ2020-05-05
အရမ်းလှတယ်၊ ငါတို့မှာရေမြောင်းတပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြproblemနာတချို့ရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဖောက်သည်တွေရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကအံ့သြစရာကောင်းပြီးသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုချက်ချင်းကူညီပေးခဲ့တယ်။
, G *** င2020-05-05
တပ်ဆင်ရန်အလွန်မခဲယဉ်းပါ။ အဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်များရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပြီးအပိုင်းပိုင်းအားလုံးသည်ကောင်းမွန်စွာအတူတကွကိုက်ညီနေပါသည်။ ငါတို့ဝယ်ခဲ့သောအိမ်သည်မာစတာရေချိုးခန်းတွင်စိမ်အနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။ ဤအကျော်ဖော်ပြထားကြသည်မဟုတ်အလွန်ကောင်းစွာအာကာသ fit ။
ကို C *** င2020-05-07
ယင်း၏ faucet ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သည်ကြီးလှ၏။ ငါအလွယ်တကူချည်မျှင်နှင့်ပင်ပိုမိုလွယ်ကူချွတ်ကွဲပြားခြားနားသော faucet အခွံမာသီးကိုဝယ်ခြင်းငှါအကြံပြုလိမ့်မယ်။
ငါ *** ဎ2020-05-10
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအသွင်အပြင်၏အသွင်အပြင်ကိုနှစ်သက်ပြီးတည်ဆောက်ထားသည့်အရည်အသွေးသည်စျေးနှုန်းအတွက်သင့်တင့်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ယိုစီးမှုသည်စနစ်တကျကိုင်တွယ်။ မရသောကြောင့်၎င်းကိုပိတ်။ ရေစုပ်ခြင်းဖြင့်မဖြစ်နိုင်ပါ။
: P *** s ကို2020-05-20
အရမ်းသဘောကောင်းတာပဲ။ ကြည့်ကောင်းပါတယ် ခေါများအတွက်ကောင်းသောပေါက်ကွဲသံကြီး!
L ကို *** y က2020-06-01
Faucet သည်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးလှပသည်။ ဒါဟာကုန်ကျစရိတ်များအတွက်တော်တော်လေးလေးလံသောတာဝန်ပါပဲ။ pop-up အဆို့သည်အခြားပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သေးငယ်ပြီးအများစုမှာပလပ်စတစ်ဖြစ်ပြီးညှိရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ပိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေးတစ်ခုဝယ်ယူခြင်းနှင့်ပါဝင်သည်ယိုစီးမှုအစားထိုးခဲ့ရသည်။
တစ်ဦးက *** y က2020-06-04
ငါ့ယောက်ျားတွေရဲ့ရေချိုးခန်းအတွက် faucet တစ်ခုလိုချင်တယ်၊ ဒါက IT ပဲ !! ဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းပါတယ် ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။ ကျနော်တို့ install လုပ်လိုက်တာကအရမ်းကောင်းပါတယ်။
L ကို *** ဋ2020-06-16
လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ထားပြီး Delta ကဲ့သို့အစားထိုးလိုက်သည်။ Brush nickel ထက်အသွင်အပြင်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော်လည်းကြည့်ကောင်းသည်
M က *** ဌ2020-06-18
အလွန်ကြည့်ကောင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့၏သေးငယ်သော RV sink ကိုပိုပြီးအသုံးဝင်စေသည်။
ငါ *** r2020-07-03
ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရေအတွက်နှင့်ဤ faucet ၏ခေတ်သစ်ဒီဇိုင်း။ အိမ်ရေချိုးခန်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောမထိုက်မတန်။
, G *** ဃ2020-07-03
ကျနော်တို့ကဒီ faucets ကိုချစ်
M က *** ဇ2020-07-10
အဓိကအိပ်ခန်းရေချိုးဖို့သုံးပါ။ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်ရှင်းလင်းသောညွှန်ကြားချက်ရှိပါတယ်။ ရေချိုးခန်းအစီအစဉ်နှင့်အတူကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုသည်။
F ကို *** င2020-07-16
ငါ၏အ moms ရေချိုးခန်း၌ထားအလွန်ကောင်းတဲ့ခဲ့သည်။
H ကို *** ဎ2020-07-19
ငါကြည့်ရတာကြိုက်တယ်၊ ဒါကကုန်ကျတာထက်ပိုကြည့်တယ်။ လက်ကိုင်ချောမွေ့လှည့်။ Pop-up ယိုစီးမှုကကောင်းပါတယ်။
အို *** s ကို2020-07-24
ဒီဟာလှပတဲ့ faucet ပါ၊ ကျွန်တော့်ရေချိုးခန်းကိုလှပစွာဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီးအခုထုတ်ကုန်နဲ့အတူဒုတိယ ၀ ယ်ယူလိုက်သောစျေးနှုန်းအတွက်ထိုက်တန်ပါတယ်။
S က *** ဃ2020-07-30
ဒီဟာကိုငါတွေ့ခဲ့ဖူးသမျှထဲမှာအံသြစရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုပါ။ ကျွန်မတပ်ဆင်ရတာတော်တော်လေးလွယ်ကူတယ်၊ faucet ၏ရောင်းချသူစံချိန်အချိန်၌ကျွန်တော်တို့ကိုထုတ်ကုန်ခဲ့အလွန်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အိမ်ပိုင်ရှင်တစ် ဦး သာမကအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤကုန်ပစ္စည်းနှင့်ရောင်းချသူကိုကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအားလုံးကိုအကြံပေးလိမ့်မည်။
အို *** t ကို2020-07-30
ငါဒီစျေးနှုန်းအချက်အဘို့ဤအရည်အသွေးတစ် faucet မျှော်လင့်မနေခဲ့ပါ။ ငါဒီအမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းတစ်ခါမှမကြားဖူးဘူး၊ ဒီရောက်တဲ့အချိန်မှာအရည်အသွေးကိုအရမ်းသဘောကျခဲ့တယ်။ အတွင်းရှိကြေးဝါအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးသည်အလွန်လေးလံသော၊ ပလတ်စတစ်နှင့်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည်လည်ပတ်ရန်ခလုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအခက်ခဲဆုံးအပိုင်းသည်ယိုစီးမှုဟောင်းကိုထုတ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်မခင်ပွန်းကလူသိပ်မများတဲ့လူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။ သူကအဟောင်းကိုထုတ်တယ်၊ အသစ်လဲပြီးအားလုံးထက်နာရီမပြည့်ခင်မှာပဲထားခဲ့တယ်။ နှင့်အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်း - မပို drippy faucet !! ကျွန်ုပ်၏နောက်ရေဥပဒေကြမ်းကိုကြည့်ဖို့မစောင့်နိုင်ပါ။
WOWOW ရေချိုးခန်းနစ်မြုပ်နေစဉ် Faucet Brushed Nickel Wides ...